Kedu ka m ga - esi jikọọ foto na Windows? - Microsoft
Isi > Microsoft > Microsoft foto kpachie - akwụkwọ ntuziaka zuru ezu
Microsoft foto kpachie - akwụkwọ ntuziaka zuru ezu
Kedu ka m ga - esi jikọọ foto na Windows?
MepeeFotoOsisi ma chọta ebe nchekwa nwerefotoị chọrọikpokọta. Jide CTRL igodo iji họrọ otutuihe oyiyiwee pịa naFotoOsisi nke Mepụta taabụ. HọrọFotoGbanyụọ atụmatụ ma gaa n'ihu ịpụta mpaghara nkefotoị chọrọ iji dochie.
Kedu ka m ga-esi kpughee foto na Windows 10?
Pịa NchNhr na n'elu-akaekpe ọzọ ma họrọ Fanye. Oge a, họrọ foto nke abụọ ịchọrọ ijikọta. Dọrọ foto gị nke abụọ ruo n'akụkụ aka nri. Gbaa mbọ hụ na foto ahụ emetụtaghị akụkụ nke foto izizi gị.15 Maachị 2021
Kedu otu ị ga - esi jikọọ foto na Microsoft Word?
Were usoro nkefotosite n'otu anya ebe ka nke ọ bụlafotooverlaps nke bu ya ụzọ ma bubata ha n'imeFotoOsisi. Họrọfotoị na-aga iji, na Mepụta taabụ, na Ngwaọrụ otu, pịa Panorama.FotoOsisi ga-mmezi nkefotonaikpokọtaha n'ime ihe ọhụrụ.
Gịnị bụ ihe kasị mma foto kpachie software?
1. 1. Hugin
PTGui. PTGui na-enye oherekpachiepanoramas nwere otutu ahịrị na ogidi.
Panoweaver 10. Panoweaver na-enye gị ohere ịchekwa panoramas gị dị ka ụdị faịlụ dị iche iche.
FotoEditọ mejupụtara (ICE) ...
Ndewo na nnabata na Lenscraft taa ana m ele stano panoramas na foto mmekọrita M ga-emekwa edemede dị iche na-egosi otu onyonyo ahụ na Adobe Photoshop ka ị nwee ike iji ụzọ abụọ m jiri mepụta panoramas, nwere ọkwa atọ.
Oge nke 1 mejupụtara idekọ osisi ahụ maka panorama, nke dị na nke a emeelarị m na ọkwa 2. Ana m edozi faịlụ ndị ahụ iji kwadebe ha maka ịkwanye na na nke atọ m n'ezie kpoo osisi ahụ n'isiokwu a anyị na-aga. ile ihe nke 2 na 3. M ewerela foto abụọ m chọrọ isonye wee webata ha ka ha were.
Ana m eji Capture 1 n'ihi na ejiri Fujixt3 m were foto wee hụ na Capture 1 na-enye nsonaazụ kacha mma. M na-amalite idezi otu n’ime onyonyo abụọ ahụ. Nke mbu, m na akwusi mmeghari agbaghari n'ihi na achoghi m setipu onyonyo a.
Ejiri m elekere Fuji 16-80 nke m nwere nke gbagọrọ agbagọ na akụkụ sara mbara, nyocha na weebụsaịtị m na m ga-etinye njikọ ahụ na nkọwapụta nkọwa dị n'okpuru ebe a, m ga-ejikwa nhọrọ ndozi ntụgharị ahụ ihe m mere n'ime oghere nnyocha kọwara. Na-esote, achọtara m ihe onyonyo onyonyo ahụ bidoro site na ịhọrọ usoro profaịlụ agba ọhụrụ maka onyonyo a Achọrọ m iji akụkụ dị iche dị elu nke ihe nkiri ahụ n'ihi na ọ masịrị m na ndò mgbe m meghere ha. Aga m emekwa ka ọnọdụ agba dịkwuo gburugburu 5,500 site na ịgabiga ụda oyiyi ugbu a.
Aga m eji sliders dị elu dị ike iji weghachi isi ihe na onyinyo, etinyekwara m ụfọdụ n'ime mgbanwe ndị ọzọ iji mee ka onyonyo ahụ dị ka m si chọọ ya. N'ikpeazụ, m ga-edozi nkọ na mkpọtụ Mbelata ugbu a enwere m ike i copyomi ngbanwe m na mpempe akwụkwọ mgbanwe m ahọrọ foto nke abụọ ma tinye nhazigharị na onyonyo ahụ amaara m na ị ga - ahọrọ foto abụọ iji hụ ha n'akụkụ ma ọ bụrụ na enwere Otu Ọ bụrụ na enwere nnukwu ọdịiche na agba ma ọ bụ nchapụta, m ga-emekwu mmezi iji kwekọọ na onyonyo abụọ ahụ mgbe ahụ enwere m ike Mbupụ foto abụọ ahụ dị njikere isonye na ihe atụ a m na-ebupụ ihe onyonyo ahụ dịka 16-bit TIFF files to desktọpụ m site na iji Adobe agba RGB ohere Ugbu a maka usoro nke atọ nke usoro ebe anyị na-ese ihe oyiyi ọnụ, Foto nke Inaffinity m na-amalite site na ịmepụta Panorama ọhụrụ site na menu faịlụ m nwere ike ịgbakwunye foto abụọ m nwere site na desktọọpụ m wee pịa bọtịnụ Jikota Panorama. Foto agbakwunyere agbakwunyere na enbu thumbnail mgbe m nwere obi ụtọ na m nwere faịlụ niile maka panorama m nwere ike pịa njikọ dị mma mgbe ahụ sụgharịrị panorama ma mepee nsonaazụ ahụ na nchịkọta akụkọ panorama ị nwere ike ịhụ ngọngọ curve nke dị ihe oyiyi etinyere idozi a ọma overlap na-eme ka a ọma overlap 24mm full etiti mgbe na-ewere a panorama na ndị dị otú ahụ a mbara n'akuku oghere ọ kasị mma iji a panorama isi nke m na-emeghị r a dee bụ mmepụta dị ka na-acha ọcha ohere, ma ọ bụrụ na M na - ahọrọ nhọrọ mgbe m na - ese ihe, foto mmekọrita na - ejupụta oghere na naanị mpaghara achọpụtara m na nke a anaghị arụ ọrụ nke ọma bụ akụkụ dị ogologo dị mkpụmkpụ nke anyị nwere na njedebe nke eserese a ka m wee bụrụ n'ọnụ ọnụ nke Kpaa okpokolo ahụ iji wepụ ya na ihe ọkụkụ.
Site na ndị a enwere m ike ịmezigharị mmezi ọ bụla iji mechaa foto ahụ Ọ bụrụ na ị hụbeghị ya, emere m usoro nke abụọ nke nkuzi a site na iji Photoshop Akụkụ mbụ nke nkuzi ahụ bụ otu, mana itinye ya ọnụ chọrọ ụfọdụ mgbakwunye nzọụkwụ, ọbụlagodi ma ọ bụrụ na ị na-eji foto mmekọrita echere m na ọ ka na-adọrọ mmasị na Iji hụ ọdịiche dị m anya na ị nwere nkuzi a
Etu esi jiri onyonyo Microsoft mee ihe onyonyo?
Mgbe ị wụnye ya, bido ngwanrọ ahụ. Ihe oyiyi a na-egosi gị ihe ị ga-ahụ mgbe ahụ. Pịa na Njikwa & gt; & gt; Ọhụrụ wee gaa ebe ihe oyiyi gị dị. Ọ bụrụ na ha enweghị otu olu, jiri CTRL họrọ ha. Pịa na Mepee. Chere ntakịrị, dabere na onyonyo ole ị na-eji. Ozugbo e mechara ya, ị ga-ahụ ya gbagote na ihuenyo ahụ.
Kedu nke kacha mma ngwa ngwa foto maka Windows?
N'okpuru ebe a bụ ngwa ntanetị kacha mma maka Windows maka ị nwere ike iji kpoo ọtụtụ foto gị ma gbanwee ha n'otu ọkaibe. 1. PTGui (Otu oge zụrụ $ 141) PTGui bụ otu n’ime ihe ndị a ma ama na Windows foto kpachie software dị na ugbu a n'ọma ahịa.
Kedu ụzọ kachasị mma iji kpoo foto ọnụ?
Ọ bụrụ na ị na-eji Windows PC, ị nwere ọtụtụ nhọrọ iji dị mfe iji tinye foto n'otu n'otu na kọmputa gị. Ọ bụrụ n'ịchọrọ iwu, ịnwere ike iji ImageMagick. Y’oburu n’inwe onye ozo, ihe osise 3D bu ihe kacha mma i gha aru.
Ogologo oge ole ka ọ ga-ewe iji stitch foto panoramic?
Ihe omume a na-adabere na GPU kpuchie ngwa ngwa nke na-enye gị ohere ịme panorama 1 Gigapixel na ihe dịka 25 sekọnd. Otu n'ime ikike ndị kachasị adọrọ mmasị bụ imepụta foto panoramic zuru oke (360 Celsius x 180 Celsius).